Tema Morsmål - Warqad arrin ka hadlaysa
01. september 2011 | Warqad arrin ka hadlaysa Temahefter
Her presenteres temahefter som omhandler arbeid med språk og mangfold i barnehagen.
Warqad ka hadlaysa xoojinta luqada iyo dhaqanka
Warqadan waxay cawimaad u tahay jaangoynta xanaanada. Waxay ka hadlaysa sida ay xanaanadu u xoojinayso luqada iyo dhaqanada kala duwan. Ma jirto hab sax ah oo looga shaqeeyo luqadaha iyo dhaqamada kala duwan, lakiin waxa la samayn karaa in shaqaalaha kala duwan lagu baraarujiyo luqadaha iyo dhaqamada jira. Si ay uga muuxato xanaanada in ay dhigtaan caruuro luqado iyo dhaqamo kala duwan haysta, sidaasna loo siiyo ilma walba kalsooni iyo ictiraaf luqadiisa. Warqada halkan ka akhriso.
Warqad ka hadlaysa habka loo xoojiyo barashada luqada
Warqadani waxay caawimaad u tahay jaangoynta xanaanada qaybtiisa labaad ee ka hadlasa xoogsaarka luqada. Luqadu waxay muhiim u tahay waxbarashada, asxaab iyo saaxiibtinimada. Wahay kale oo muhiim u tahay ka qayb qaadashada bulshada. Warqadu wahay kale oo caawimaad u tahay shaqaalaha xanaada si ay u dheerigeliyaan caruurta oo u xoojiyaan barashada luqada. Halkan ka akhriso warqada oo dhamaystiran.